Xildhibaano iyo mas’uuliyiin ka fal-celiyey shaqaaqadii garoonka Muqdisho + Video. |
Xildhibaano iyo mas’uuliyiin ka fal-celiyey shaqaaqadii garoonka Muqdisho + Video.
Muqdisho(GNN):- Siyaasiyiinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Mahad Salaad, Cabdiraxmaan Odowaa iyo Wasiirka Amniga ee maamulka Galmudug, Axmed Macalin Fiqi ayaa si adag uga hadlay dhacdadii maanta ka dhacday Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, kaasi oo uu dagaal gacan ku hadal ah ku dhex-maray ciidamo ka tirsan NISA iyo shaqaalaha waaxda hay’adda socdaalka.
Si kastaba, siyaasiyiintaan ayaa dhamaantood dhacdadii maanta ka dhacday garoonka diyaaradaha Muqdisho dusha u saaray madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo Taliyaha NISA, kuwaasi oo ay sheegen inay muddooyinkii dambe ku howlanaayeen soo saarista ciidamo noocan ah.
Xiisadan Garoonka ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhalatay, kadib markii shaqaalaha garoonka iyo ciidanka NISA ay isku qabteen dad ajaaniib ah oo NISA u socday, kuwaas oo loo diiday inay gudaha usoo galaan dalka, iyadoo aan la hubin waxa ay yihiin iyo ujeedka socdaalkooda.
Wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in goobta ay shaqaaqadu ka dhacday uu goor dambe tegay taliyaha hay’adda socdaalka jinsiyadaha, Maxamed Aadan Koofi oo xalliyey arrintaasi, waxaana si caadi ah kusoo laabtay dhaq-dhaqaaqa garoonka Aadan Cadde.